Inguva yeiyo Indian Stock Exchange? | Ehupfumi Zvemari
Inguva yeiyo Indian Stock Exchange?
Kune vazhinji varidzi vekumusoro-soro avo vakarova iyo Nifty inogadzira inodzoka muhuwandu hwe35% kusvika 60%. Vakawana purofiti yakakura kubva pamakore avo ezviitiko mumisika yemasheya. Vanofanirwa kunge vakagadzira kudzoka kwakaderera kana vangangodaro vakarasikirwa nemari pamasheya.
Mumazuva angu ekutanga ekudyara mari, ini handina kuita chero purofiti nekuti ndanga ndichiisa mari mumatokisi mushure mekuteerera kuraira kwemasheya kubva kumabhizimusi (uye anonzi maTV chiteshi nyanzvi).
Ibasa rako. Wese munhu kubva kune brokerage imba kuenda kune emari mawebhusaiti kune TV chiteshi nyanzvi zvinoita kuti iwe utende kuti kuisa mari mumatokisi kwakaomarara sedombo resaenzi. Mushure mezvose, kana iwe uchiziva kusarudza masheya wega, saka uchaita sei mari.
1 Bullish India Stock Exchange
2 Mhando dzekudyara
3 Koshesa kudyara
4 Mutero wemitero
5 Sarudzo maitiro
6 Bhizinesi rekambani iri nyore here?
Bullish India Stock Exchange
Asi ko kana ndikakuudza kuti pane iri nyore uye yakapusa nzira yekuziva mamwe makuru masheya?
Disiki: Ini handikurudzire chero chiito. Mazita ezviito zvakataurwa muchinyorwa chino anongoratidzira maitiro ekuongorora. Ita yako sarudzo usati waisa mari.
Iwe unobatsirwa kubva pamusika wemasheya nekuzviongorora kwako ...
… Uye mune ino chinyorwa, ini ndiri kuzofamba newe kuburikidza nhanho-nhanho nzira yekusarudza matura makuru uye maitiro ekudyara muIndia stock market mu2020.
7 Matanho Ekudyara muStock Market muIndia yeVatangi
Ngatitarisei nhanho-nhanho-nhungamiro yemari yekudyara mumusika wemasheya muIndia.
Kusarudza uye Kuchenesa Zviito Zvakakodzera Uchishandisa Mari
Sarudza chete makambani aunonzwisisa
Tarisa makambani ane gomba rinogara riripo (yemakwikwi mukana)
Tsvaga makambani ane akadzika mazinga echikwereti
Shandisa zvemari ratios RoE uye RoCE kuona akakodzera masheya
Kutendeseka, pachena uye kugona manejimendi
Kutsvaga iyo chaiyo mutengo kutenga iwo masheya
Iwe unogona kudzidza nezvekudyara mumatokisi nemari shoma seRs 10.000 yekudyara.
Dzidza maitiro uye uashandise pamwe nemari inosvika zviuru gumi, kana iwe ukaita purofiti zviuru zvishanu mugore rekutanga saka nzira imwecheteyo inogona kushandiswa nemari yekudyara yeRs 10.000. kuwana 5000 Rs. mibairo mune ramangwana.
Kudzidza kwakakosha kukunda kukunda
Disiki: Izvo zviito zvataurwa muchinyorwa haisi kurudziro yekutenga kana kutengesa. Tinovatora semuenzaniso. Chengetedza mumatura mushure mekushingaira kwako.
Ivo vanogona kutevedzera maitiro angu kunyangwe vaine shoma kana vasina ruzivo rwezvinyorwa zvemari. Vimba neni, unogona kuwana matura makuru ane huchenjeri hushoma uye ruzivo rwekutanga rwebhizinesi.
Ndisati ndatsanangura yangu nhanho-nhanho nzira yekusarudzwa kwemasheya, ngatitangei tinzwisise nzira mbiri dzakasiyana dzekuwana pundutso mumisika uye ndeipi nzira mbiri inoshandiswa nevazhinji vevatengesi vepamusoro pasirese kuti vazvigadzirire pfuma.
Iwe uri kukanganisa kana iwe uchifunga kuti kutengesa uye kukoshesa kudyara chinhu chimwe chete.
Kutengesa kwakanangana nekuita kazhinji purofiti mune ipfupi nguva furemu, zvisinei nemombe kana bheya misika.
Munguva yemisika yemombe, kutengesa kunosanganisira kutenga nemutengo wakaderera uye kutengesa nemutengo wakakwirira munguva pfupi. Mumisika inodonha, vanoita purofiti nekutengesa yakakwira nekutenga yakaderera, inozivikanwa zvakare sepfupi.
Sezvo maitiro ekutengesa anosanganisira kupinda nekubuda munguva ipfupi, iyo nguva yekuchengetedza yezvikamu haina kupfuura maminetsi mashoma kana zuva chete kana, mune dzimwe nguva, mazuva mashoma.
Vanhu vanoita maitiro ekutengesa vanoshandisa maturusi senge tekinoroji ongororo inoshandisa zviratidzo zvakaoma sekufamba kweavhareji, iyo stochastic oscillator yekufungidzira mafambiro emangwana emutengo wemasheya.
Pazasi peiyo skrini inoratidza technical technical charts kufanotaura mafambiro emitengo yeAxis bank share.
Kutengesa kunogona kuve nengozi (kurasikirwa kukuru) nekuda kwekushomeka kukuru kwemitengo yezvikamu. Kana iwe usina zano rakajeka uye usiri kumhanya zvakakwana, unogona kupedzisira warasikirwa zvikuru, uchidzima mari yese. Kana iwe uchifarira kutengesa saka unogona kudzidza maitiro ekuita intraday stock kushambadzira muIndia.
Musika uzere nemienzaniso yakadaro yevarume vakarasikirwa nemari nekuzvibvumira kutengesa.
Ndakaedza kutengesa makore mashoma apfuura, ndakaita purofiti yeRs 10.000 pazuva rekutanga uye ndakazopedzisira ndarasikirwa pamusoro pe100.000 mumazuva anotevera. Ndaiziva kuti kutengesa hakusi hunyanzvi hwangu.
Ndakatarisa pane simba rangu, ndiko kuti, kutsvagisa masheya uye kuibata kwenguva yakareba.
Warren Buffett anoti, "Kana iwe usingafunge nezve kuve nesitoko kwemakore gumi, usatombofunga nezve kuve neyako kwemaminetsi gumi." Sekureva kwake, iwe unofanirwa kuisa mari mumakambani iwe aunogona kuchengeta zvachose.
Chinhu chikuru chinowanikwa nevashambadziri kubva pakubata masheya kwenguva yakareba seiyi mukana wekuparadzanisa, kupatsanurwa kwemasheya, uye zvinonyanya kukosha kukwira kwakanyanya mumatunhu emitengo sezvo bhizinesi repasi (reaya masheya) richikura zvine mutsigo mumakore.
Aya masheya anonzi "akawanda-mabhegi" nekuda kwekudzoka kwakawanda kwavanogadzira kuitira kukosha kwekudyara nyanzvi. Imwe bhenefiti iyo inokosheswa nekudyara inopa pamusoro pekutengesa ndeyekuti munhu anogona kurarama nekuchinja-chinja mumutengo wemitengo unokonzerwa nezviitiko zvekunze kana nekudzikira mubhizinesi nekutenda kuti mutengo wemari uchadonha. .
Warren Buffet. Izvo iwe zvaunoona mumufananidzo iwoyo isimba rekuumbwa mukutamba, iri panhongonya yekukosha kwekudyara. Paunobata masheya kwenguva yakareba, zvinoguma mukukura kwekujekesa kunogadzira hupfumi hwakawanda.
Vanhu vanoita kukosha kwekudyara vanoshandisa yakakosha ongororo kutora mhedzisiro nezvekudyara muchitoro. Mukuongorora kwakakosha, mutengo wezuva nezuva kuchinja kunoonekwa, asi pachinzvimbo chinotarisa pakudzidza bhizinesi rekambani, indasitiri mairi, mari yayo, mhando yemanejimendi, nezvimwe.
Ipo vanhu vanoita zvekutengeserana vanovavarira kuti vakurumidze 10% kusvika 20% vanodzoka pane chimwe chitoro vozochitengesa kuenda kune chimwe. Neiyi nzira iwe unogona kuwana purofiti asi usambo gadzira hupfumi. Fortunes inogadzirwa nekudyara mumatanda akakodzera uye kuibata kusvikira waita mari.
Nekutengesa, unopedzisira wabhadhara 15% yenguva pfupi -mari yekuwana mutero pane yese purofiti yekutengeserana yaunoita sezvo yako yekubata nguva yezvikamu iri chokwadi isingasviki gore rimwe.
Ipo, uine kukosha kwekudyara, yako capital kuwana mutero iri 10%, zvisinei nekuti yako purofiti ndeye 100 crore kana maRs 100 kana iwe uine zvikamu zveinopfuura gore rimwe.
"Kuti uwane mari kubva mumatanda iwe unofanirwa kuve nechiono chekuvaona, ushingi hwekutenga, uye moyo murefu wekuzvibata." Iko kune chaiwo zviuru zvemakambani akanyorwa pane BSE (Sensex) uye NSE (Nifty). Kunze kwekunge iwe wakashongedzwa nemaitiro aunogona kushandisa kusefa, iwe unozorasika mugungwa remakambani.
Maitiro ekudyara andiri kuzogovana newe ndiwo andinodzidzira kusefa masheya ndisati ndaisa mari maari.
Kukoshesa kudyara igungwa kune iro pacharo, uye varidzi varo vanopinda nenzira inonetesa yekuongorora masheya nekuverenga zvinyorwa zvemari, mishumo yegore, uye rumwe ruzivo rwakasiyana zvine chekuita nehutano hwemari yekambani usati waisa mari.
Asi, zvichibva pane zvandakadzidza pamusoro pemakore, ndakatora matanho ari nyore uye anoshanda anoshandiswa kutanga munzira yekusarudzwa kwemasheya kunyangwe ndisina ruzivo rwakadzama rwemari. Naizvozvo, kune yako yekutanga kufunga, iwe unogona kushandisa zvinotevera nyore-kuita-sarudzo sarudzo nzira yekusefa kunze kwezviito izvo zviumbwa zvinoita kunge zvine simba.
Semuenzaniso, nerubatsiro rweEquitymaster yemahara stock stock appraisal chishandiso, ini ndashandisa nzira dziri pamusoro yekusarudza kusefa mamwe emasheya ekufunga kwangu kwekutanga.
Iwe unogona ipapo kutarisa mamwe makiyi emari akakosha sechikamu chematanho ekusarudza nekudzvanya pakadhi yedata rekambani. Kuti udzidze zvakawanda nezve paramende yandakashandisa mune yakasarudzika nzira yekusefa masheya, unogona kureva ichi chinyorwa pane zvemari ratios.
Nhanho 2. Sarudza chete makambani aunonzwisisa
Iye zvino izvo zvichibva paChitatu 1 iwe wakasvina zvinyowani zvine ruzha kubva kune mamwe marara, dzidza zvakawanda nezve masheya aya nekuverenga nezve iri pasi pekambani zvakanyanya sezvaunogona.
Iwe unogona kuita izvi nekushanyira webhusaiti yekambani, uchitevera zvigadziriso pamapuratifomu enhau, kutsvaga kambani paGoogle, uye kuwana mhinduro kubva kune vamwe vako vatengesi. Kudzidza zvakawanda nezvekambani kunobatsira iwe kuti unzwisise bhizinesi rekambani uye nekukupa mhinduro dzemibvunzo mitatu inokosha.
Bhizinesi rekambani iri nyore here?
Ini ndinonzwisisa here chigadzirwa / sevhisi?
Ini ndinonzwisisa mashandiro ebhizinesi uye kuti mari inoitwa sei?
Izvo zvakakosha kuti iwe uise mari mumakambani iwe aunonzwisisa, zvirinani mune yekutanga nhanho iwe paunenge uchidzidza kuisa mari mumatanda. Nenzira iyoyo iwe uchave nechokwadi chekuti haurasikirwi nemari.
Semuenzaniso, pamasheya atakabvisa padanho rekutanga, ndingadai ndakatarisa kumatekiniki mateki seTech Mahindra, Vakrangee, uye Mindtree Ltd. kutanga.
Imhaka yekuti, ini ndine ruzivo rwakakura rwebasa muchikamu chehunyanzvi hweruzivo uye ndinofarirawo tekinoroji, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwandiri kuti ndinzwisise mabhizinesi aya, zvikonzero zvekukura kwavo, uye kufanotaura kuti ramangwana raizobuda sei
Saizvozvowo, hama yangu anobva kunzvimbo yemishonga uye nekudaro zvingave nyore kwaari kuti anzwisise zviito zveiyo chikamu. Panogona kuve nemabhizinesi mazhinji asingade chero kudzidziswa kuti uvanzwisise zvachose - funga zvigadzirwa zvevatengi senge shangu, shaving cream, mota, nezvimwe.
Semuenzaniso, pane yako yakasvinwa rondedzero yemasheya iri maviri-mavhiri kambani yekugadzira. Izvo hazvina basa kuti uve neruzivo nezve mairi-mairi maindasitiri kuti uzive kuti iwo maviri-mavhiri chikamu chakagara chakaratidza kukura muIndia nekuda kwekuwedzera kudiwa uye zvirinani kubatanidza nzira.
Saizvozvowo, apo chikamu chezvivakwa chaive chichikura muIndia, makambani anogadzira mataera (Kajaria), sanitary ware (Cera) nemamwe makambani ekutsigira akafanana aisvikika. Bhizinesi modhi yekambani yaifanirwa kuve yakapusa uye kambani yaifanirwa kumufadza. Chekupedzisira, kana iwe ukasawana chero masheya (makambani) aunogona kunzwisisa ipapo, tora nguva yekufunda iyo kambani neindasitiri yayo.
Nhanho 3. Tsvaga makambani ane gomba rinochengetedza (yemakwikwi mukana)
Izvo hazvina kukwana kuti uone makambani akapasa bvunzo dzemari uye avo mabhizimusi mamodheru ari nyore kunzwisisa.
Mune terminology yebhizinesi, Pit ndiyo yemakwikwi mukana wekuti imwe kambani ive pamusoro peimwe mukati meimwe indasitiri. Iyo yakawedzera mugero, inowedzera mukana wemakwikwi wekambani uye inowedzera kugadzikana iyo kambani inova.
Zvinoreva kuti zvingave zvakaoma kwazvo kuti vakwikwidzi vadzinge iyo kambani uye vatore chikamu chayo chemusika. Zvino, icho chioko (kambani) iyo iwe yaungade kusarudza uye kuisa mukati. Mienzaniso yeiyi moat inogona kuve simba rechiratidzo, kodzero dzepfuma yezvivakwa uye patent, network mhedzisiro, mitemo yehurumende inodzora zvipingamupinyi zvekupinda, uye zvimwe zvakawanda.
Semuenzaniso - Apple ine zita rakasimba rezita, simba remutengo, patent, uye kudiwa kukuru kwemusika kunoipa iyo mugero wakakura unoita sezvipingamupinyi kumamwe makambani.
Hazvishamise kuti Apple yave padyo nekuve trillion-madhora kambani uye kuti yaunza purofiti yakakura gore rega rega, ichidzosera mari hombe kune vayo vanoita mari. Mumwe muenzaniso wakareruka wemhando dzine yakasimba moats ndeye Maruti, Colgate, Fevicol iyo ine hukuru hwekurangarira kukosha mune yeruzhinji ndangariro.
Nekupa kwavo kwakakura kwekuparadzira netiweki mumatunhu mazhinji uye nehurumende kuita digitization kusunda, zvingave zvakaoma kwazvo kuti mukwikwidzi mutsva avabvise pamusika.
Hazvishamise kuti mutengo wemitengo wakakwira kubva paRs 16 muna 2010 kusvika pamadhora mazana mashanu muna500. (Cherekedza: Mitengo yazvino inogona kukwira nekudzika zvichienderana nekurwadziwa kwenguva pfupi mumisika)
Naizvozvo, tsvaga uye uone makambani akadaro ane akasimba moats mumazuva ekutanga.
Nhanho 4. Tsvaga zvakaderera zvikwereti
Makuru makero echikwereti anoisa njodzi huru kukambani. Maitiro akati wandei esarudzo atakashandisa kusefa masheya aive echikwereti / equity ratio uye neiyo reshiyo yazvino.
Aya ma ratios maviri anoratidza kuti kambani ine kuvimba kwakadii nemari (chikwereti) yekubhadhara kukura kwayo uye kuti kambani ichakwanisa here kuzadzisa zvisungo zvenguva pfupi zvemari.
Naizvozvo, kana uchisarudza masheya, kunze kwemahara aya, unofanirwa kutarisa kuti kambani yakabata sei chikwereti chayo mumakore apfuura. Iyo kambani iri kudzikisa chikwereti chayo ichawedzera ichawedzera purofiti yayo, chinova chiratidzo chakanaka kune hutano hwemari yekambani.
Matipi akareruka ekutarisa hutano hwemari:
Imwe nzira yekuita izvi kuongorora bhajeti rekambani uko zvikwereti zvazvino zvekambani uye chikwereti chenguva refu chakanyorwa. Kazhinji, chikwereti chenguva refu chikwereti chinokura mushure memwedzi gumi nemaviri. Uye zvikwereti zvazvino zvinosanganisira chikwereti chekambani icho chinofanirwa kubhadharwa mukati megore.
Mabhizinesi ane yakawandisa-yakareba chikwereti anoona zvichinetsa kubhadhara zvikwereti izvi, sezvo mazhinji emari yavo achienda kubhadhara mubereko, zvichiita kuti zviome kushandisa mari kune zvimwe zvinangwa. Izvi zvinopa njodzi yekuchengetedza uye zvinogona kutungamira mukubhuroka kwekambani. Ivo vanogona kutevedzera maitiro angu kunyangwe vaine shoma kana vasina ruzivo rwezvinyorwa zvemari. Vimba neni, unogona kuwana matura makuru ane huchenjeri hushoma uye ruzivo rwekutanga rwebhizinesi. Maitiro akati wandei esarudzo ataishandisa kusefa masheya yaive chikwereti / equity ratio uye neiyo reshiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Inguva yeiyo Indian Stock Exchange?
Ko Warren Buffet anoisa mari yake kupi?